jeudi, 10 décembre 2020 11:45
« Kaly Tsinjo » : 100 Ariary ny sakafo, hitsinjara izany ireo mpivarotra hanimasaka
Ireo mpivarotra hanimasaka eny anivon’ny Fokontany no hahandro sy hitsinjara ny «Kaly Tsinjo» ka hiara-hiasa amin’ny ministeran’ny mponina sy ireo Kaominina ary ireo tompon’andraikitra isan-tokony. 100 Ariary isan’olona fandraisan’anjara ho an’ireo misakafo eny isaky ny fizarana sakafo atoandro.Hisy lamina manokana ho fanatanterahana izany, ary mialoha ny fankalazana ny Noely no atomboka izany mandritra ny fe-potoana tsy voafetra. Hisy ny karazan-tsakafo miova isan’andro mandritra ny herinandro izay miantomboka ny Alatsinainy ka hifarana ny Sabotsy. Hisy famatarana manokana ireo toerana mitsinjara ny “Kaly Tsinjo” izay natao ifampitsinjovana manoloana ny fahasarotan’ny fiatrehana ny fiainana andavanandro.
Nahazo sakafo mafana sy ara-pahasalamana avy amin’ny fiaraha-miasan’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra sy ny BNI Madagascar ny Zokiolona avy ao amin’ny FIZOMA, avy ao amin’ny Boriboritany Voalohany ny Talata 8 Desambra 2020. Fiaraha-misakafo izay notanterahina tao amin’ny Tranom-pokonolona Analakely. Nomena tombony manokana ireo zokiolona amin’izao ankatokin’ny fety izao. Sehatra iray ahafahana mampiroborobo ny fiaraha-miasa amin’ny tsy miankina ny hetsika toy izao hoy ny tompon’andraikitra avy eo anivon’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra. Mbola hitohy manerana ireo Boriboritany enina eto an-dRenivohitra ity hetsika fizarana sakafo ho an’ny Zokiolona ity.
mardi, 08 décembre 2020 17:12
Barikadimy Toamasina : Raikitra indray ny fitakian’ny mpianatra
Mivaky roa ny mpianatry ny anjerimanontolo aty Barikadimy Toamasina, ka ahiana ny mety hisian’ny fifandonana eo amin’ny roa tonta. Ny andaniny mitaky ny fampidinana ny saram-pisoratan’anarana sy ny fialan’ny filohan’ny oniversite. Ny ankilany kosa mitaky ny fitohizan’ny fampianarana izay nisaritaka nanomboka ny herinandro lasa teo. Lafo loatra, hoy ireo ampaham-pianatra manao fitakiana, ny saram-pisoratan’anarana ho an’ireo hanomana ny “Master 2”, izany hoe ireo efa any amin’ny ambaratonga fahatelo. Mitentina 900 000 Ariary izany ho an’ny fakiolte DEGMIA, raha 500 000 Ariary kosa ho an’ny fakiolten’ny teny sy siansan’ny mahaolona.
Tontosa tetsy amin’ny Magro Behoririka ny sabotsy 5 desambra 2020 ny hetsika Tolotanana ho an’ny any Atsimo, nandraisana izay fitia tsy mba hetra ho fanohanana ireo mpiray tanindrazana ianjadian’ny kere any atsimo. Navitrika ny tanora, tonga maro ny ray aman-dreny. Nandray anjara hatramin’ny EmmoReg tonga nanara-maso ny filaminana teny an-toerana, sy nampanaja ny tsy hisian’ny fitangoronana mihoatra ny fetr’isa ho fitandremana ara-pahasalamana. Tonga teny an-toerana nitondra ny anjara birikiny ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana. « Fisantarana ihany ity fa manetsabe mbola ho avy », hoy izy naneho hafaliany fa « afaka nitondra ny fiaraha-mientana ho an'ireo havantsika any atsimo ». Nisy hetsika toy izao koa tao amin’ny Tiko Ambodisoanambo Toamasina, ary hitohy amin’ny 9 desambra 2020. (Jereo Sary Tohiny)
Nankalaza ny Masimbavy Barbe mpiaro azy ny Sampana mpamonjy voina an’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra ny 4 desambra 2020. Izay hiateherana amin’ny fiarovana amin’ny afo amin’izay mino. Ny fankalazana androany dia mifantoka amin’ny fampihononana sy fametrahana ao anatin’ny asa iombonan’ny mpamonjy voina. Nohamarihana tamin’ny hetsika fifaninanana ara-panatanjahatena sy fiaraha-misakafo ny fotoana mba ho fiaraha-mientana hanomezana lanja ny « Esprit de corps » ny mpamponjy voina. Voalazan’ny Kolonely Razafimanahaka Tiana, Lehiben’ny sampana mpamonjy voina, fa efa fanao isan-taona izao fankalazana izao.
vendredi, 27 novembre 2020 19:20
Sary : Mesupres
Oniversitem-panjakana : Trano 9 fonenan'ny mpianatra no haorina
Trano 9 fonenan'ny mpianatra no haorina ho fanamaivanana ny olan'ny oniversite manerana ny Nosy, ka ny iray any Mahajanga, iray any Antsiranana, roa ao Antananarivo, iray any Toliara, iray any Morondava, iray any Fenoarivo Atsinanana, iray any Soavinandriana ary iray any Antsirabe. Pr Assoumacou Elia Béatrice, Minisitry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa ankehitriny rahateo dia maintimolalin'ny "Cité Ankatso I" ka mahafantatra tsara ny andavanandron'ny mpianatra eny anivon'ny "Cité Universitaire" eny. Efa vita ny fitsidihina ireo toerana hanaovana ny fotodrafitr'asa, ary efa voasivana sy voafidy ireo orinasa hanatanteraka izany.
Nanome tolo-tanana ho an’ireo fianakaviana sahirana miisa 150 tetsy amin’ny Boriboritany fahaefatra ny orinasa STAR sy ny “Fondation Coca Cola” izay nisy fiaraha-miasa teo amin’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra, ny 20 novambra 2020. Ny anton'izao fanampiana izao dia fitsinjovana ireo renim-pianakaviana sahirana eny anivon’ny Fokontany sy noho ny fisian’ny valan’aretina Covid-19.
Sendika faharoa mijoro eo anivon’ny Antenimierandoholona ny Sendika ASA “Antoky ny Sehatry ny Asa eto amin’ny Antenimierandoholona”, ivondronan’ireo mpiaramiasa toa ny mpikarakara ny trano, mpamily, mpahay lalàna, toekarena, tetipivoarana, serasera, arofenitra, fifandraisana iraisam-pirenena, kajy mirindra sns... Nomarihana ny Zoma 20 Novambra 2020 ny fanokafana ny asa sendikaly ataon’ny ASA. Tanjon’ny Sendika ASA ny hampitombo ny traikefan’ny mpiasa rehetra, ary hampahalala azy ny andraikiny sy ny zo mifanandrify amin’izany mba hananan’ny tsirairay fitonian-tsaina maharitra eo am-panatanterahany ny adidy sy andraikitra iantsorohany. Mpikambana feno ao amin’ny vondrona sendikaly SSM (Solidarité Syndicale de Madagasikara) ny Sendika ASA.Amin’ny maha Sendika azy dia tsy mandray baiko politika na avy aiza na avy aiza, na avy amin’iza na iza ny Sendika ASA.
jeudi, 19 novembre 2020 19:49
Aretina mamany lava : Misy fandidiana maimaimpoana ao amin'ny CHRR Bongolava
Nanomboka ny fiandohan'ity herinandro ity, ary haharitra roa herinandro ny fandidiana maimaimpoana ny aretina mamany lava, izay atao ao amin'ny CHRR Bongolava, na hopitaliben’i Tsiroanomandidy. Natao hanamaivanana ny fahasahiranan'ny Vahoaka sy ho fampiharana ny fitsaboana manaja ny maha-olona, ary indrindra ny ady amin'ny kolikoly ity hetsika ity.
8 tapitrisa isan-taona eo ireo olona maty vokatry ny fifohana sigara sy fihinanàna paraky maneran-tany, 6 hetsy ireo namoy ny ainy vokatry ny fievohana setro-tsigara. Raha ireo antontan'isa ireo no jerentsika dia anisan'ny loza mitatao ho an'ny Fahasalamam-bahoaka, tsy eto amintsika irery ihany, fa maneran-tany mihitsy ny fifohana sigara sy fihinanana paraky, koa manentana ny tsirairay samy handray ny andraikitra tandrify azy manoloana izany ady izany.